ရောဘတ် ဘွိုင်းလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၆၈၉ တွင် တွေ့ရစဉ်
(1627-01-25)၂၅ ဇန်နဝါရီ၊ ၁၆၂၇
အိုင်ယာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ၊ ဝေါတာဖို့ဒ်ကောင်တီ၊ လစ်ဇ်မောရဲတိုက်
၃၁ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၆၉၁(1691-12-31) (အသက် ၆၄)
ရောဘတ် ဘွိုင်းလ် (အင်္ဂလိပ်: Robert Boyle; FRS (/bɔɪl/) သည် အင်္ဂလိပ်-အိုင်းရစ် သဘာဝဒဿနဆရာ၊ ဓာတုဗေဒပညာရှင်၊ ရူပဗေဒပညာရှင်၊ တီထွင်သူတစ်ဦးဖြစ်၍ ပထမဆုံးသော ခေတ်သစ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်ဟု အများအားဖြင့် ယူဆခံရသောသူလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ၎င်းသည် ခေတ်သစ်ဓာတုဗေဒပညာရပ်ကို တည်ထောင်သူများစွာထဲက တစ်ဦး၊ လက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်သည့် ခေတ်သစ် သိပ္ပံနည်းကျ နည်းလမ်းဖော်ထုတ်သူ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြများစွာမှ တစ်ဦးဟူ၍သတ်မှတ်ကြသည်။ ဘွိုင်းလ်နိယာမ (Boyle's law) ဖြင့် နာမည်ကျော် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်၏ ။ ထိုနိယာမက အကယ်၍ အပူချိန်သည် အပိတ်စနစ်၌ ကိန်းသေဖြစ်နေပါက ပကတိဖိအားနှင့် ဓာတ်ငွေ့တစ်ခု၏ ထုထည်တို့ကြား ပြောင်းပြန်အချိုးကျပုံကို ဖော်ပြရှင်းလင်းထားသည်။ ၎င်းရေးသားခဲ့သော လက်ရာစာပေများအနက် The Sceptical Chymist သည် ဒာတုဗေဒပညာရပ်၌ အခြေခံအုတ်မြစ်စာအုပ်တစ်ခုဟူ၍ ယူဆကြ၏ ။ ဘွိုင်းလ်သည် အင်္ဂလီကန်ဂိုဏ်းဝင် ဘာသာတရား ရိုသေကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်၍ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ လက်ရာများကြောင့်လည်း ထင်ရှားလူသိများသည်။
↑ "Samuel Hartlib's influence on Robert Boyle's scientific development" (1965). Annals of Science 21 (4): 257–76. doi:10.1080/00033796500200141. ISSN 0003-3790.
↑ Newton၊ Isaac (February 1678)။ Philosophical tract from Mr Isaac Newton။ ကိမ်းဘရစ်ချ် တက္ကသိုလ်။ But because I am indebted to you & yesterday met withafriend Mr Maulyverer, who told me he was going to London & intended to give you the trouble ofavisit, I could not forbear to take the opportunity of conveying this to you by him.
↑ Fellows of the Royal Society။ Royal Society။
↑ "Robert Boyle"။ Encyclopædia Britannica။ 24 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Acott, Chris (1999). "The diving "Law-ers": A brief resume of their lives.". South Pacific Underwater Medicine Society Journal 29 (1). ISSN 0813-1988. OCLC 16986801. Archived2April 2011 at the Wayback Machine.
↑ Levine၊ Ira N. (2008)။ Physical chemistry (6th ed.)။ Dubuque, IA: McGraw-Hill။ p. 12။ ISBN 9780072538625။
↑ Encyclopædia Britannica။
↑ MacIntosh၊ J. J.; Anstey၊ Peter။ "Robert Boyle"။ in Zalta၊ Edward N. (ed.)။ Stanford Encyclopedia of Philosophy။
↑ O'Connor၊ John J.; Robertson၊ Edmund F.၊ "ရောဘတ် ဘွိုင်းလ်"၊ MacTutor History of Mathematics archive၊ University of St Andrews .
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရောဘတ်_ဘွိုင်းလ်&oldid=728072" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။